Muxuu Jose Mourinho ka yiri heshiis kordhinta Martial ?
Thursday, April 25th, 2019 - 13:44:17
Saturday November 03, 2018 - 10:54:11 in Wararka by Hussein Hadafow
Macallinka Manchester UnitedJose Mourinho ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Martial oo heshiis cusub u saxiixi doono kooxda.
Martial, oo 22 jir ah, ayaa dhaliyay 4 gool sadddexdi kulan ee lasoo dhaafay horyaalka, basle heshiiskiisa waxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Wiilka reer France ayaa la sheegay inuu iska diiday dalab dhawaan ay kooxdiisa usoo bandhigtay, waloow ay Man United haysato heshii kordhin hal sano oo ay laacibka u samayn karto inkasta oo ay danaynayso heshiis hal sano ka badan.
Mourinho ayaa ka hor bilowga xilli ciyaareedkan aad u doonayay in laacibkan la iibiyo, basle waxuu Macallinka United oo doorbidayaa inuu sii joogo si uu laacib wanaagsan oo taariikh sameeya uga noqdo Old Traford.
"Howsheyda maaha wadahadashda qandaraasyada, marka la fiiriyana inta badan kuma mashquulo, waana ku faraxsanahay inaanan ka qayb qaadanarrimahan.” Ayuu warfidiyeenada u sheegay Jose Mourinho.
" Way iska cadahaywaxaan rajaynayaa inaan heshiis isku afgaran doono. Waa ciyaaryahan tayadiisu sarayso- qof kastana wuu garanayaa tan iyo markii uu Monaco joogay, sidoo kale waa ciyaaryahan si wanaagsan u fahamsan kulamada macnaha gaarka leh.
Martial ayaa 41gool u dhaliyay kooxdiisa waxuuna caawiyay 26 147 kulan uu u saftay tan markii uu Monaco kaga soo biiray 2015.